June 2021 - WARAR HUBAN
[ July 28, 2021 ] Guddoomiyaha Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashooyinka oo gaaray Kismaayo	Wararka
[ July 28, 2021 ] Weerarada Internetka Oo Ku Soo Xoogeeysanaya Mareekanka Iyo Biden Oo ka hadlay	Wararka
[ July 28, 2021 ] Dowlada Maraykanka oo Soomaaliya ugu deeqay 199 Malyan oo Dollar	Wararka
[ July 28, 2021 ] Guddiga xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka oo ku wajahan Kismaayo	Wararka
[ July 28, 2021 ] Agaasimaha Hay’adda NISA Fahad Yaasiin Oo Magacaabis Sameeyay	Wararka
R/Wasaare Abiy Oo Xaaladda Ku Adkaatay iyo Qadiyadda Tigrayga Oo Gaartay New York
June 30, 2021 M.Jo 0
Guddaha Itoobiya Waxaa laga Dareemayaa Saan Saan Colaadeed Jabhadda TPLF ayaa dhankeeda waddo dhaqdhaqaaqyo ay ku dooneyso in ay magaalooyin cusub kala wareegto ciidamada Itoobiya. Guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in ay heer gaba gaba ah mareyso tirinta codadkii la dhiibtay doorashada Itoobiya ee golaha wakiilada . 65% ayeey guddiga ku dhawaaqen in la tiriyay codadka doorashada ka dhacday dalka, marka laga reebo gobalka Soomaalida iyo Tigreega. Guddiga doorashada ayaana ku sheegay in ay maalmaha soo socda shaacin doonaan doorashada uu welli muranka ka taagan yahay . Ciidamada TDF ayaa dhankooda wada qorsha ay ku sheegen in ay doonayaan in ay kula wareegan gobalka Amaxaarada . Ra’iisul wasaaraha Itoobiya iyo Maamulkiisa ayaana weli ka hadlin dhaqdhaqaaqyada ay wadaan TPLF, xilli xabad joonin uu codsaday ay ka diiday Jabhadda hubeysan . Abiy oo horay ugu guuleystay billadda Nabadda ayaa iminka lugaha kula jira jawi colaadeed oo ka dhashay mudda kororsi uu sameystay, wallow hadda laga fashiliyay . Hogaamiyahan biladda Nabadda hayta ee dagaalka oogay ayaa dhamaan waxa ku soo jeestay indhaha [Sii aqri]
Maxay Kawada Hadleen Rooble Iyo Safiirka Kenya Lucas Tumbo?
Ra’iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Somaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbo iyagoo ka wadahadlay xiriirka labaa dal. Kulankan ayaa ahaa kii u horeeyay ee uu Ra’iisul Wasaare Rooble uu la yeesho safiirka Kenya Lucas Tumbo, tan iyo markii dib loo soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Safiirka Kenya ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo xoojinta xiriirka labada dal iyo in kor loo qaado iskaashiga ka dhaxeeya. Dhanka kale Labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa bilihii la soo dhaafay xiriirkooda uu ahaa mid aan wanaagsanayn,hase yeeshee dowlada Qatar ayaa ka shaqeysay sidii labada dal xiriirkooda u wanaagsanaan lahaa.
Ciidanka Talyaaniga oo lagu amray inay ka baxaan Saldhig laga taageeri jirey Hawlgallada Somalia
Ciiddanka Talyaaniga ee ku sugan Saldhigga Ciiddanka Cirka ee Al-Minhad ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu amray inay dalkaasi kaga baxaan ugu dambayn maalinta Jimcaha ee soo socota oo ku beegan bisha soo socota ee July 2-da. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday Go’aankaasi sababo la xiriira Muran u dhexeeya labada Waddan, iyadoo ay Dowladda Talyaaniga bilowgii sanadkan hakiyeen hubkii ay ka iibsan jireen dalkaasi. Ka-bixitaanka Ciiddanka Talyaaniga ee Saldhiga Al Minhad Air Base ee ay ku lahaayeen magaalladda Dubai waxa uu soo shaac baxay Toddobaadkii hore, kadib, markii uu Wargeyska ka faalooda Arrimaha Difaaca ee Defense News ka soo xigtay Warkaasi Xildhibaan ka tirsan Guddiga Difaaca ee Barlamaanka Talyaaniga oo lagu magacaabo Matiyo Preego Di Keremango. Ciiddanka Talyaaniga waxay Saldhigga Ciiddanka Cirka ee Al Minhad Air Base u adeegsan jireen inay ku hakadaan Diyaaradahooda ee taageeradda Loojistikada u fidiya Hawlgalladda Caalmiga ee ka socda Geeska Afrika, Badweynta Hindiya iyo dalalka Afgaanistaan iyo Iraq. Dowladda Talyaaniga waxay ka baaraan degaysaa qaabab kale oo lagu soo daad-gureyn karo ciiddankooda ku sugan dalka Afganistan, haddii ay [Sii aqri]
Booliiska lInterpol Oo la wareegay xaruumaha shirkad Internet oo gaar loo leeyahay
Howlgal uu booliiska caalamiga ah sameeyay, ayaa lagula wareegay xarumaha internet-ka ee shirkad gaar loo leeyahay, taas oo lagu qarin jiray aqoonsiyada iyo halka ay ku sugan yihiin dembiilayaasha internetka. Booliiska ayaa sidoo kale la wareegay baraha internet-ka ee ay leedahay shirkadda Double VPN. Waxay ugu beddeleen farriin ku wargelineysaa in dadka isticmaali jiray ay haatan hay’adaha xoojinta sharciga la wareegeen warbixinta iyo xogta ku keydsan baraha shirkadda. Howlgalka waxaa ku lug lahaa booliiska dalalka Yurub, Mareykan iyo Canada. Hay’adda booliiska Yurub, ayaa sheegtay in shirkadda aad loogu xayeysiin jiray burcadda internet-ka ee ku hadla afafka ingiriisiga iyo Ruushka in Gacanta lagu Dhigay.
Jabhada TPLF Oo la wareegay Deegaano Cusub iyo ciidamada Eretira Oo Baxsad ah
June 30, 2021 F.G 0
Jabhada TPLF ayaa wali wada howlgalo ay dib ugula wareegayaan magaalooyin iyo deegaano badan oo looga qabsaday dagaalkii ay la galeen ciidamada federaalka Itoobiya iyo Ciidamada garab siinaya ee Eritrea. Ciidamada taabacsan TPLF ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta caasimada gobolka Tigrey ee Mekelle , waxa ayna kooxda sii wadaa hada in ay qabsadaan magaalooyin kale oo gacantooda horey uga baxay. Jabhada TPLF ayaa saacadihii lasoo dhaafay la wareegtay magaalada Shire, oo qiyaastii 140km u jirta waqooyi-galbeed, waxaana magaaladan horey u joogay oo isaga baxay ciidamo katirsan dowlada Eritrea. Ciidamada federaalka Itoobiya iyo ciidamada Eritrea ayaa hada u muuqda kuwa ka niyad jabay kasii dagaalanka gobolka Tigrey, waxa ayna ciidamada baneeyeen magaalooyin iyo deegaano ay horey dagaal kula wareegeen. Jabhada TPLF ayaa ku hanjabtay in awood kula wareegeyso deegaanada gacantooda ka maqan, waxa ayna saraakiisha hogaamineysa kooxdaasi shacab ka Tigrey ka dalbadeen taageero si mar kale talada gobolkaasi ula wareegaan.
Madaxweeyne Qoor-qoor Oo Casho Sharaf u sameeyey Madaxda Madasha Qaran iyo qaar kamid ah Musharaxiin
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-qoor) ayaa xalay casho sharaf ah u sameeyay madaxdii kala qeyb gashay shirkii golaha wadatashiga Qaran ee ka dhacay Muqdisho. Masuuliyiinta munaasabadan cashada ah ka qeyb galay waxaa ka mid ah Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni, Madaxweynaha Koonfur galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo Sidoo kale waxaa ka qeybgalay casho sharaftan xubno ka tirsan Midowga Musharaxiinta oo ay ka mid ahaayeen Madaxweynihii hore ee Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre iyo qaar kale. Kulanka ayaa yimid kaddib markii la soo gebogabeeyay Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran, kaasi oo shalay laga soo saaray Jadwalka Doorashooyinka Dalka.
Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir Oo Soo Bandhigay Burcad Dhac U Gaysan Jirtay Shacabka Muqdisho
Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay Burcad la sheegay in ay dhac u gaysan jireen Shacabka Magaalada Muqdisho, waxaana Ciidanku ay kusoo qabteen Howlgallo ay ka sameeyeen Qaar ka mid ah Xaafadaha degmooyinka Muqdisho. Burcaddaan ayaa lagu soo bandhigay Xaruunta CIDda ayaa waxa ay dhac u gaysan jireen dadka shacabka ah, waxaana sidoo kale lasoo bandhigay hub kala duwan iyo dharka Ciidanka oo ay dadka ku dhici jireen. Kusimaha Afhayenka Gobolkani Banaadir Gaashaanle Cabdi fitaax Aadan Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa Waxaa uu sheegay in dadkaan ay soo qabteen ay ka kooban yihiin 14 ruux, kuwaasi oo uu tilmaamay in ay dhac ka gaysan jirteen gudaha Caasimadda Muqdisho, isagoo intaa ku daray in ay ku labbisan jireen dareeska qaybaha kala duwan ee Ciidanka Dowladda, sida Booliska, Millateriga oo ay dharkooda ku dhibaateyn jireen shacabka sida uu sheegay Afhayenku. Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in Burcaddani ku hubeysnaayeen hubka fud-fudud sido Qorayga AK47, Bistoolado iyo waxyaabo kale oo ay u adeegsan jireen dhaca sida Toorreyo iyo waxyaabo kale sida uu ka dhawaajiyay Kusimaha Afhayenka [Sii aqri]
R/Wasare Rooble Oo Magacaabay Guddiga Dib U Heshiisiinta Gobolka Gedo
June 29, 2021 F.G 0
R/ Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay Guddiga dib-u-heshiisiinta Gobolka Geddo ee dowlad Goboleedka Jubbaland. Wareegto uu soo saaray R/ Wasaare Rooble oo ka duulaya heshiiskii 27-kii May 2021 ayaa lagu magacaabay Guddiga dib-u-heshiisiinta Gedo oo ka kooban 4-xubnood oo ka kala tirsan Maamul Goboleedyada dalka, iyadoona Jubbaland laga reebay. Xubnaha Guddiga ayaa kala ah Wasiirka Arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, Wasiirka Arrimaha Puntland Maxamed C/raxmaan Dhabancad, Wasiirka Qorsheynta Koonfurta Galbeed Axmed Madoobe Nuunow iyo Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Galmudug Aadan Cismaan Xuseen. R/Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta ayaa Guddiga faray Guddiga inay si deg deg ah u bilaaban arrimaha dib-u-heshiisiinta Gobolka Gedo, isla markaana la kulmaan cid kasta oo ay quseyso dib-u-heshiisiinta. Arrinta Gobolka Gedo ayaa kamid aheyd Qodobada uu khilaafka xoogan ka taagnaa qabsoomida doorashada dalka ka dhaceysa, waxaana sigaar ah isugu haayay Maamulka Jubbaland iyo dowladda Federaalka, iyadoona halkaas la geeyay Ciidamo farabadan oo ka tirsan dowladda.
Wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Tigray ee dalka Ethoobiya
Ciidamada Tigray ee la dagaallamaya ciidamada dowladda Itoobiya ayaa ballanqaaday inay ka saari doonaan Ciidamada daacada u ah R/Wasare Abiy Axmed ee ku sugan gobolka, inkasta oo xabad joojin hal dhinac ah ay ku dhawaaqeen maamulka federaalka ee Addis Ababa. Ciidamada Tigreega ayaa sheegay maanta in caasimada gobolka, Mekelle ay boqolkiba boqol ay dib ula soo noqdeen maamulkooda kadib dib u gurashadii ciidamada dawlada Itoobiya maalin ka hor. Getachew Reda, oo ah afhayeenka Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF), ayaa sheegay inay sii wadaan baacsiga ciidamada dowlada Itoobiya ayna sii kordhin doonaan. “Waxaan xoogga saareynaa sidii aan u wiiqi lahayn awoodaha dagaal ee cadawga… Marka hadii in aan aadno dhulka Amxaarada waan aadeynaa, xitaa Eritrea waan weeraraynaa,” ayuu afhayeenka Reda u sheegay Reuters. Dib u gurashada ay ciidamada Itoobiya dib u gurteen ayaa daba socota guulo maalmo ah oo ay gaareen xoogaga Tigreega ee dagaalka kula jira dowlada Ethiopia iyo xulafadeeda, oo ay ku jiraan ciidamo ka socda dowlada deriska Eritrea iyo dagaalyahano ka socda gobolka Ethiopia ee Amxaarada, oo xuduud la leh Tigray dhinaca koonfureed. [Sii aqri]
AKHRISO : Jadwalka Doorashada dalka oo lagu dhawaaqay
Shirka u dhaxeeyay R/wasaaraha Xukumadda Faderaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa la soo gabagabeeyay waxaana laga soo saaray jadwalka cusub ee doorashooyinka Soomaaliya. Madaxda ayaa isla meel dhigay in doorashada xubnaha aqalka sare ay dhacdo 25-ka July, 2021-ka. Doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka, ayaa loo asteeyey mudada u dhaxeyso 10-ka August illaa iyo 10-ka September, 2021-ka. Doorashadaan in ay qabsoonto ayaa si weyn looga wada sugayay ee Hogaamiyaasha Waxaana ay ku heshiiyeen iney qabsoonto 10-ka October, 2021-ka. Hoggaamiyeyaasha ayaa sidoo kale tixgelin siiyey dumarka, oo waxaa laga dhimey 50% khidmadda laga qaadayo haweenka u sharraxan baarlamaanka. Arrinta Gedo, ayaa iyana waxaa loo saarey guddi dibu heshiisiin, oo uu magacaabay ra’iisal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Halkaan ka Aqri Bayaanka ka soo baxay golaha wadatashiga qaran. JADWALKA DOORASHADDA SOOMAALIYA IYO GO’AAMADA KASOO BAXAY SHIRKA WADATASHIGA DOORASHADDA Muqdisho: 29 June 2021: Golaha wadatashi ee Doorashada Soomaaliya, ayaa soo saaray Jadwalka doorashada Soomaaliya iyo go’aamo ay ku gaareen Shirka arrimaha Doorashada uga socday Muqdisho. JADWALKA DOORASHADDA 1. Tababarka iyo Doorashadda Guddoonka Gudiyada Doorashadda ( 30 June – 05 July [Sii aqri]